Batrị E-bike, Batrị LiFePO4, Batrị Mmegharị - SOSLLI
Batrị nke Ise
Ngwọta batrị Lithium kachasị mma na ndị na-enye batrị tụkwasịrị obi na Onye Mmekọ
Batrị E-igwe kwụ otu ebe.
Otu akụkụ dị mkpa nke E-igwe kwụ otu ebe
Nhọrọ kachasị mma maka ụdị ọ bụla na ụdị maka gị
ISE9001: 2015 batrị maka nchekwa ike
njikwa njikwa njikwa mma
10+ emeputa otu afọ
Oke iweghachite & oke nchekwa
Ntozi ahia nwere ike di uku nke 2600mah 3.7V 1 ..
18650 3.6V 3500mAh Lithium Ion Batrị Sanyo Ba ...
3.6V 6250mAh LG Lithium ion Batrị Pack Maka Na ...
18650 3.6V 2600mAh Batrị Lithium Samsung ...
11.1V 30Ah Li-Ion 18650 Lithium Ion Li-Ion Batrị Maka ngwugwu Maka Ìhè Solar Street
N'IHI gịnị ka ị họọrọ SOSLLI
gịnị mere ị ga-eji họrọ batrị lithium-ion
Hilọ ọrụ batrị Lithium-ion aghọọla ụlọ ọrụ batrị nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka ihe ọ bụla site na ụgbọ ala eletrik ruo ebe nchekwa ike, site na azụmahịa ruo na ngwa ọrụ. Amamịghe nke kemịkalị batrị lithium-ion gụnyere. · Nnukwu ike dị elu nke na-ebuga oge ogologo n'etiti ebubo · act nwetụrụ obere na obere ọkụ · Ngbapụta ọsọ ọsọ karịa · Na-arụ ọrụ arụ ọrụ na ebe nchekwa ọkụ ọkụ · Ogologo okirikiri · Ọrụ mmezi
· Ọrụ 7/24, Nzaghachi ngwa ngwa maka ajụjụ ndị ahịa dị n'etiti 12hrs · Ngwọta pụrụ iche na nke pụrụ iche enyere ndị ahịa anyị aka site n'aka ndị injinia na ndị ọrụ ọkachamara / ndị nyocha. Gbalite nsogbu ozugbo (24hrs) ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla adịghị mma n'ahịa anyị. · Onye nrụpụta batrị lithium nwetara ISO9001: 2015, UL, CE, RoHS, UN38.3, MSDS wdg. Products Ngwaahịa batrị SOSLLI niile kpuchitere mkpuchi mkpuchi ngwaahịa US $ 1,000,000 site n'aka CPIC.
Uru SOSLLI: (Mejuputa sistemu Ọdịmma ISO9001)
1. Ndị ọrụ mmepụta Production 1600, Ngwakọta dị elu esi Japan na South Korea bute ụzọ eji emepụta ihe. 2. Usoro njikwa ogo 4-Dimensional, ndị ọrụ 110 QC, nyocha 100%. Industrylọ ọrụ ahụ na - ebunye 10 dị elu, batrị batara CE, RoHS, UL, KC, IEC62133, MSDS, UN38.3, wdg ngwa chọrọ. 4. Innovation 66+ na-aga n'ihu na injinia ọkachamara, R&D etiti na etiti ule na ụlọ ọrụ siri ike, ihe ndị eji eme ihe na nnukwu ego.
Iji ezi obi kwuo okwu, nyenu ndi ahia na ndi oru aka. Ndi otu n’etu ntughari uche n’inye ha ihe ndi kachasi nma batara nke Li-ion.
Valuelọ ọrụ ọnụ ahịa
Ime ihe n'eziokwu na ịdị uchu, Ọhụụ na arụmọrụ, Ogo na ọrụ, Njikọ ọnụ na mmeri.
Kọmitii ụlọ ọrụ
Bụrụ onye isi teknụzụ kacha mma, njiri mara mma, na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Dabere na akụkọ mgbasa ozi si mba ọzọ, Tesla erutela nkwado na Gaslọ Ọrụ Ike Gas Pacific (PG&E), otu n'ime ụlọ ọrụ ike kacha ukwuu na United States, iji mepụta usoro batrị dị ukwuu nke nwere ike ruru 1.1GWh maka nke ikpeazụ. Electrek kọrọ na oru ngo a bụ ihe…
Mgbasa Ozi Nchekwa Polaris Energy: 2017 Urban Energy Internet Development (Beijing) Forum na Energy Internet Demonstration Project Mwube na Mmekọ Seminar mere na December 1, 2017 na Beijing. N'ehihie ụlọ ọrụaka, Jiang Jiuchun, onye isi ndị National Ener…
Mgbasa Ozi Nchekwa Polaris Energy: Enwere ike ikwu na 2016 na 2017 bụ “afọ echiche” nke ịntanetị ike. N'oge ahụ, onye ọ bụla nọ na-atụle "gịnị bụ ịntanetị ike", "gịnị kpatara ịntanetị ịntanetị ike," na "gịnị nwere ike ...
E guzobere Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd. na 2011. Ọ bụ ụlọ ọrụ dị elu ọkachamara na R&D, mmepụta na ahịa nke batrị lithium. Ugbu a, ọ nwere ngalaba azụmahịa atọ: arụmọrụ batrị lithium, Ngalaba ngwaahịa mechiri, na ụdị SOSLLI nke ya. Isi p ...
OSlọ ọrụ ụlọ ọrụ SOSLLI
ụlọ ọrụ anya Suo Sili na-eto nke ahụike ma bụrụ nnukwu ụlọ ọrụ na narị afọ! Ebumnuche anyị Buru ụlọ ọrụ ume ọhụrụ nke mba ụwa na teknụzụ na-eduga, ọmarịcha mma, ihe ohuru na arụmọrụ, yana ọrụ klaasị mbụ! isi uru ịdị nkọ, iguzosi ike n'ihe, ihe ọhụrụ na arụmọrụ, ach ...
Ngwunye batrị, Ibe batrị Lithium, Batrị 20ah Lithium Ion, Batrị Lithium batrị, Sili batrị Lithium Ion, Batrị Lithium-Ion 3.6v,